MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Myanmar has agreed to the appointment of Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Republic of Germany to the Republic of the Union of Myanmar
Myanmar has agreed to the appointment of Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Republic of Germany to the Republic of the Union of Myanmar
by adminmofa on 24/07/2017 at 5:20 PM
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Republic of Germany to the Republic of the Union of Myanmar.
Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel was born in Minden, Germany on 17th July 1953. She Studied English, Spanish and Development Economics from 1975 to 1979 and obtainedaDiploma in Applied Linguistics and Development Economics from Heidelberg University of Germany in 1979. Moreover, she studied at the University of Wisconsin, USA from1980 to 1982 and receivedaMaster’s Degree in African Studies. She joined the Federal Foreign Office of Germany in 1984 and had served in various capacities at the Federal Foreign Office and German Embassies in Tanzania, Austria, and the United States of America till 2007. Afterwards, she served asaVisiting Professor for International Relations at the German speaking Andrássy Gyula University of Budapest, Hungary from 2007 to 2008. She had also served as the Ambassador of Germany to Hungary from 2008 to 2011 and to Nigeria from 2011 to 2014. Since September 2014, she has been serving as Ambassador of the Federal Republic of Germany to Finland.
Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel အား ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ဂျာမနီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက သဘောတူညီပြီး ဖြစ်သည်။
Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel ကို ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ မီဒန်းမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ သူမသည် ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၉ ခုနှစ်အထိ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ Heidelberg တက္ကသိုလ်၌ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ စပိန်ဘာသာနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တို့ကို လေ့လာဆည်းပူးခဲ့သည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ယင်းတက္ကသိုလ်မှပင် အသုံးချ ဘာသာဗေဒနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ဖြင့် ဒီပလိုမာ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်မှ ၁၉၈၂ ခုနှစ်အထိ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Wisconsin တက္ကသိုလ်၌ ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး အာဖရိကလေ့လာရေး ဘာသာရပ်ဖြင့် မဟာဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိ ဂျာမနီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် တန်ဇန်နီးယားနိုင်ငံ၊ သြစတြီးယားနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီသံရုံးများ၌ ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူမသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ ဟန်ဂေရီ နိုင်ငံ၊ ဘူဒါပတ်စ်မြို့ရှိ Andrássy Gyula တက္ကသိုလ်၌ နိုင်ငံတကာလေ့လာရေး ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဧည့်ပါမောက္ခအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဂျာမနီသံအမတ်ကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီသံအမတ်ကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ လက်ရှိအချိန်အထိ ဖင်လန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျာမနီသံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် လျက်ရှိသည်။
သူမသည် အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သားသမီး(၂)ဦး ထွန်းကားသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်